Miyuu Paul Pogba go’aansaday inuu xagaagan isaga tago kooxda Manchester United? – Gool FM
Miyuu Paul Pogba go’aansaday inuu xagaagan isaga tago kooxda Manchester United?
(Manchester) 26 Maarso 2019. Ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la soo warinayaa inuu go’aansaday inuu isaga tago kooxdiisa Manchester United xagaagan.
Xiddiga xulka qaranka France ayaa ku raaxaysanaya bilo yar oo qurux badan oo uu ku qaadanayo ka hoos ciyaaridda macallin Ole Gunnar Solskjaer, waxayna u muuqatay inuu 26-sano jirkaan ku qanacsan yahay nolosha garoonka Old Traffrod.
Yeelkeede, Pogba ayaa dhowaan ku tilmaamay Real Madrid inay tahay ‘koox riyo’, waxaana la soo jeediyay todobaadkii la soo dhaafay in laacibkan uusan sii joogi doonin gudaha England, iyadoo mugdi la geliyey mustaqbalkiisa mudada dheer ee dalka Ingiriiska.
Jariiradda AS ayaa warinaya in Pogba uu doonayo inuu tartan cusub ka sameeyo meel kale, wakiilkiisa Mino Raiola ayaana isku dayaya inuu ciyaaryahankaan ku adkeysto heshiis kale oo koox kale ah.
Real Madrid ayay u badan tahay inay tartanka saxiixa laacibkan kala kulmayso Pogba kooxdiisii hore ee Juventus, iyadoo labada kooxood ay rajeynayaan inay ka faa’ideystaan ciyaaryahankan oo labo sanadood ka hartay qandaraaskiisa.
"Kooxda Real Madrid way u xiistay Cristiano Ronaldo" - Casemiro